Filtirka warqadda sariirta ah ee Flat, miiraha qaboojiyaha mashiinka wax shiidaya
Maaddada steel Kaarboon birta ah, birta aan birta ka sameysnayn.
Nooca filter Filter filter
Qaab dhismeedka: Nidaamka suunka
Lambarka Moodalka XYGL
Qiyaasta Miisaanka: Codsiga: Codsi Macaamiil aan caadi ahaynMashiinka mashiinka
Mashiinkaani wuu shaandhayn karaa oo ka saari karaa wasakhda birta iyo kuwa aan birta ahayn ee dareeraha qaboojinta ku jira si wax ku ool ah u shaashadda shaashadda shaashadda. Maaddaama ay tahay qayb ka mid ah qalabka mashiinnada wax lagu shiido ee kala duwan, waxay sifeeysaa dareeraha qaboojinta si fiican, waxay kordhisaa nolosha adeegga dareeraha qaboojinta, waxay sare u qaadeysaa tayada makiinadda ee qaybaha shaqada waxayna hagaajineysaa deegaanka goynta
Cabbirka 1. Compact, buuq hoose, oo ku habboon in lagu rakibo qalabka mashiinka.
2.Waxaa loogu talagalay ku habboon rakibidda, jagooyinka mootada iyo golaha korontada waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalayaasha.
Waxay ku shaandheysaa warqada shaandhada, kahor intaadan shaqeynin, waa inaan marka hore ku faafinaa warqada miiraha shabakada silsiladda Kadib emulsion ama saliid waxay ku qulqulayaan warqada shaandhada. Marka wasakhda ku jirta warqadda miiraha ay sii badato, emulsion-ka ma mari karo, ka dib barkad dareere ah ayaa lagu sameeyaa warqadda miiraha.Qolka dareeraha ee dareeraha dareeraha ah ayaa kor u kacaya, ka dibna wuxuu u kaxeeyaa matoorka warqadda inuu shaqeeyo waa la soo saaray, warqad cusub ayaa si otomaatig ah ugu faafi doonta miiraha.Hawladu waxay u socotaa sidan. Xaqiijinta shaandhaynta waxaa lagu go'aamiyaa warqada miiraha.Qaadi ahaan, saxnaanta miiraha ayaa ah 10-30μm.
Shaandhada faashadaha waxaa badanaa loo isticmaalaa sifeynta qaboojiyaha qalabka mashiinka kala duwan Qalabkani wuxuu leeyahay wasakh, hagaajiyaa saacadaha shaqada ee wax ku oolka ah, wuxuu yareeyaa shaqada culus ee wadaha qalabka mashiinka sidoo kale wuxuu kordhiyaa dusha sare ee shaqada iyo hagaajinta tayada alaabta.
Sida loo xusho
Si aad u dooratid nooca moodalka ah ee lagu go'aaminayo heerka socodka ee Booqday Furimaha Dagaalka, sidoo kale waa in la tixgeliyaa dhererka gadaal gadaal iyo meel lagu rakibo.
Subassembly / qayb Waqtiga Ficil Tilmaamaha / tilmaamaha amniga
Silsilad DriveDrive 3 bilood Hubi xiisadda oo adkee haddii loo baahdo, saliid silsiladda wadista
Qaadista usheeda dhexe iyo dariiqa gawaarida lagu hago —- —- Hubi duugga iyo ciyaarta Marka gudbinta suunka waxyeello gaarto, hubi oo beddel haddii loo baahdo
Qalabka korontada Motor (yada) —- —- Eeg tilmaamaha hawlgalka ee soo saaraha
Fiilooyinka 3 bilood Hubi dillaacyo iyo waxyeelo Beddel fiilooyinka cilladaysan
Heerka beddelashada 3 bilood Hubso shaqada Ka gudub labada dhibic bedel ahaan adoo adeegsanaya gacanta
Qalabka difaaca 3 bilood Hubso shaqada
Bambooyin —-—- Eeg tilmaamaha hawlgalka ee soo saaraha
Kunteenarada 6 bilood Hubi inuu daadanayo, waxyeello iyo daxalka Hubso inaysan walxaha halista ahi ka baxsan
Suunka gaadhsiinta 6 bilood Hubi waxyeellada Beddel suunka gaadhiga markaad waxyeello gaadhay
Xiga: Filter filter for filter qaboojiyaha, filter filter duub